Isikhathi esining impela, balimi, multi-storey izindlu zangasese unesithakazelo kangakanani ukusula ukuvaleka egumbini lokugezela. Okokuqala, kungase kudingeke uqonde izimbangela ukubukeka kwayo. Ngokuvamile kwakheka ukuvaleka is izinwele sabanjwa ipayipi kwanoma iyiphi imfucuza, izinwele isilwane noma ezinye izinto ezingase ngephutha zigcine indle. Ngokwemvelo, lokhu kusho ngokushesha ukulungisa inkinga, ngokushesha uzokwazi ukubuyela ekuphileni okuvamile.
Umangele kanjani ukuhlanza ukuvaleka egumbini lokugezela, kudingeka unqume ukuthi phezu izindlela ukukusiza ukuxazulula le nkinga. Ngakho, kude ithuluzi ethandwa kakhulu, okuyinto Ungasusa kukakhokho, a plunger. Ungathenga nganoma yisiphi isitolo hardware. Nokho, kufanele ube high quality, kungenjalo kuyoba engenamsebenzi.
Ukuze kuqedwe odla ngale ndlela, kubalulekile ukwakha ingcindezi ethile e ipayipi. Ukuze wenze lokhu, uvalwe close zonke izimbobo ezingadingekile, isibonelo, echibini. Manje yokugezela kufanele uthole amanzi. Ngaphezu kwalokho plunger embozwe abakhwabanisi futhi izinikele eyingqabavu ukunyakaza phezulu naphansi. Ngemva kokuphothulwa ukudonsa ezidingekayo ngokucijile ukudonsa ithuluzi emgodini. Kulokhu, ingxenye isimiso uyovela, kanti bonke abanye kuzokwenzeka ipayipi.
Ngakho indlela lihlanzekile ukuvaleka ku plunger yokugezela kungaba nzima, ungasebenzisa amakhemikhali ezingeziwe kancane noma ngokuphelele chaza okuqukethwe ipulaki futhi ibenze phansi abakhwabanisi. Ngokwesibonelo, ungasebenzisa into enjalo, njengoba "Mole". Kodwa, sicela uqaphele, ukuqeda okuvimba kusho senzelwe. Phawula futhi ukuthi uketshezi (noma powder) kuye kudingeke ukuba banikeze isikhathi esithile ukuze ukuba enze okuthile. Ngokwesibonelo, ngemva ethela abakhwabanisi ozoyisebenzisa yokugezela akukwazi athathe amahora ambalwa kuya osukwini.
Nquma ukuthi ukusula ukuvaleka egumbini lokugezela ngosizo i-chemistry, wazi ukuthi kamuva usazothola kufanele zisebenze plunger ukuthi i-plug kusele ngokuphelele. Ngezikhathi, usadinga zisebenzisa la mathuluzi ukuze ususe uqwembe kusukela ezindongeni tube.
Uma usuke wazama zonke izindlela ezitholakalayo futhi angazi kanjani babe nempumelelo ukuvaleka egumbini lokugezela okwamanje, zama sebenzisa intambo metal. Kuyinto kuyithuluzi eliphumelela kakhulu, okuyinto izenzo ezinkulu lapho kungekho ezinye izindlela awazange asize. Ikhebula kumele kube lugucugucuke ukuze badlulisela emphethweni tube. Nokho, kufanele ngesikhathi esifanayo ahlinzeke rigidity esiphezulu ibhoboze ukhokho. Ekupheleni leli thuluzi kufanele abe izimpondo zensimbi ezincane, okuyinto eyokusiza ukukhuthaza ukuvaleka.
Sebenzisa ikhebula silula. Umuntu udinga kuphela kancane kancane push it emgodini abakhwabanisi futhi enze ukunyakaza ukujikeleza. Ukuqedwa okuvimba yokugezela in amacala olunzima kudingeka ukukhiqiza ochwepheshe-Plumbers. Mhlawumbe i-plug kwakheka ingxenye isikhuphukeli, okuyinto etholakala ngaphandle efulethini. Yilokho zonke izici umzabalazo ne clog, okuyinto angafeza yena.
Indlela ukukhetha eshaweni? iseluleko lochwepheshe okukhetha ebiyelwe eshaweni
"Dekatilen": yokusetshenziswa zomuthi
Welding Cold metal - ikhambi jikelele ukulungiswa ezincane
I esiyingozi kakhulu endaweni eMoscow. Ezindaweni eziyingozi kakhulu futhi iphephile eMoscow
Kuyini zwekazi iyini
Institute of Almazov eSt. Petersburg